Duqa Muqdisho oo Dhaqaale badan ku bixiyay Munaasabad lagu taageerayo oo maanta dhaceysa | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Duqa Muqdisho oo Dhaqaale badan ku bixiyay Munaasabad lagu taageerayo oo maanta dhaceysa
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Magaaladda Muqdisho Thaabit Cabdi ayaa ugu dambeyn ka hoos baxay cadaadiskii siyaasadeed ee ka saarnaa inuu saldhigto.
Duqa Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay wajahayay mucaarad badan kadib qaabkii uu usoo magacaabay xilalka sare ee maamulka oo beelo badan ay saluugeen.
Munaasabadan waxaa si hoose usoo agaasimay qarashka ku baxayana dhiibay Duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed si uu u sameeyo dhoolo tus una mujiyo in ay taageero badan ka heytsto beesha uu kasoo jeedo ee Mudulood.
Waxaa Munaasabadan lagu casuumay kana soo qeyb galaya Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya, Xildhibaano katirsan labada Aqal, Siyaasiyiin, waxgaradka beelaha dega gobolka Banaadir, Haween, Dhalinyaro iyo Marti sharaf kala duwan.
Munaasabadan oo lagu wado in ay kasoo qeyb galaan Boqolaal qof ayaa u muuqata mid uu isku muujinayo Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay mucaaradad xoogan kala kulmayay Siyaasiyiin iyo waxgarad kasoo jeeda Beesha Mudulood.